အမာရော့ခ် 1.4 ထောက်ပံ့သောကွန်ပျူတာစနစ်များစွာဂီတဖွင့်စက်တစ်ခု
မှအင်တာနက်ရေဒီယိုနားထောင် Spotify, Grooveshark, SomaFM, Magnatune, Jamendo, SKY.fm, Digitally Imported, JAZZRADIO.com, Soundcloud, Icecast နှင့် Subsonic servers.
ကူးတင်ပြီးသီချင်းများကိုရှာဖွေပြီးစတင်ဖွင့် Box, Dropbox, Google Drive, နှင့် OneDrive
မျက်နှာစာသံုးသီချင်းစာရင်းများ၊ တင်သွင်းနှင့်တင်ပို့ အမ်၃ယူ၊ အိစ်အက်စ်ပီအက်ဖ်၊ ပီအယ်အက်စ်နှင့်အေအက်စ်အိစ်။
အမ်ပီသရီး၊ အောဖ့်ဗော်ဘစ်စ်၊ အောဖ့်စဖိစ်၊ အက်ဖ်အယ်အေစီသို့အေအေစီကဲ့သို့ဂီတပံုစံပြောင်းလဲ။
စက်လည်ပတ်စနစ်များစွာ - ဝင်းဒိုး၊ မက်စ်အိုအက်စ်အိပ်စ်နှင့်လင်းနက်စ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်။
နှင့်အဝေးထိန်းအသုံးပြု စက်ရုပ်ပစ္စည်း, ဝီအဝေးထိန်းတစ်ခု, အမ်ပီအာအိုင်အက်စ်(သို့)ကွန်မန်းလိုင်း။
ဂီတကိုကူးယူသင့်ရဲ့ အိုင်ပေါ့၊ အိုင်ဖုန်း၊ အမ်တီပီ(သို့)သိုလှောင်စုပံုယူအက်စ်ဘီစက်။
ကလီမန်တိုင်းသည်စနစ်များစွာဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင် Amarok 1.4, ဂီတကိုလျှင်မြန်စွာရှာဖွေပြီးစတင်ဖွင့်နိုင်သောလွယ်ကူစွာအသံုးပြုနိင်သောမျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းထား။
ထုတ်ပြန်ချက် - ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း - ကူးဆွဲများအားလံုးကိုပြသ
Version 1.3.1 released - အင်္ဂါ, 2016 ဧပြီ 19
Version 1.3 released - သောကြာ, 2016 ဧပြီ 15
ပုံစံ၁.၂ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - တနင်္ဂနွေ, 2013 အောက်တိုဘာ 13
ပံုစံ 1.1 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - ကြာသပတေး, 2012 အောက်တိုဘာ 25
ယခုပံုစံတွင် ဂျီပေါ့တာ.နက် ဖြင့်ပို့စ်ကဒ်ပေါင်းစပ်မှုနှင့်ညီတူညှိခြင်းအထောက်အကူပါဝင်။ ဆောင်းကလောက် နှင့် ဂျက်စ်ရေဒီယို.ကွန်း မှဂီတများကိုဘေးတိုင်ရှိအင်တာနက်မျက်နှာစာတွင်ရယူနိင်ပြီး ဂူဂယ်ဒရိုက်ဗ် သို့ကူးတင်ပြီးသီချင်းများကိုပါရယူနိင်။ ချပ်ပြားဝိုင်းမှဖွင့်သောဂီတများကိုစိတ်နေစိတ်ထားဘားမျဉ်းပြသနိုင်။ ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစံု အခြားအချက်အလက်များအတွက်ဤတွင်ကြည့်ပါ။
ပံုစံ 1.0 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - အင်္ဂါ, 2011 ဒီဇင်ဘာ 27
ယခုပံုစံတွင် စပေါ့တီဖိုင်, ဂရုရှက် နှင့် စကိုင်း.အက်ဖ်အမ်/ကွန်ပျုတာစနစ်ဖြင့်တင်သွင်း အထောက်အကူများပါဝင်။ သီချင်းတိုက်(သို့)အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဂီတကိုလွယ်ကူစွာရှာနိုင်ရန်အများသံုးရှာဖွေအင်္ဂရပ်ထည့်သွင်းထား။ အသံဓာတ်ပြားများအထောက်အကူ၊ ပံုစံပြောင်းလဲခြင်းရွေးပိုင်ခွင့်များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောချိန်ညှိချက်အရေးအသား၊ ချက်ချာအယ်လ်ဘမ်အဖံုးရှာဖွေမှုများနှင့်ပရိုဂရမ်ယိုစိမ့်မှုများဖြေရှင်းပြီးများပါဝင်။ ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစံု အခြားအချက်အလက်များအတွက်ဤတွင်ကြည့်ပါ။
ပံုစံ 0.7 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - တနင်္ဂနွေ, 2011 မတ် 27
ယခုပံုစံထဲတွင်အလိုအလျောက်ပြီးစီးနိင်သည့်အသစ်စက်စက်အမည်တည်းဖြတ်အရေးအသားအင်္ဂရပ်ကလီမန်တိုင်းတွင်ပါဝင်ပြီးဂီတကိုအလိုအလျောက်စစ်ရွေးခြင်းနှင့်မြူးဇစ်ဘရိန်းမှပျောက်နေသောအမည်များယူဆောင်နိုင်။ ကယူးအပြားအထောက်အကူလည်းပါဝင် - သီချင်းတိုက်များကိုဖတ်ရှုသောအခါအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတေးသံလမ်းကြောတစ်ခုဆီကိုသီးခြားစီပြသနိုင်။ သီချင်းတိုက်မျက်နှာစာတွင်အယ်လဘမ်အဖုံးများပြသခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ပြီးသီချင်းများမီးခိုးရောင်ပြနိုင်ခြင်း၊ "ဘရောက်ဇာထဲတွင်ပြသ" ရွေးပိုင်ခွင့်များ၊ ကွန်ယက်ပရောက်ဇီများ၊ "သီချင်းတိုက်အပြည့်ပြန်လည်ဖတ်ရှု" ရွေးပိုင်ခွင့်များနှင့်သီချင်းကိုသတ်မှတ်နေရာတွင်တိကျစွာရှာဖွေရန်တေးသံလမ်းကြောဆလိုက်တာများအတွက်ကိရိယာထိပ်ပါဝင်။ ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစံု အခြားအချက်အလက်များအတွက်ဤတွင်ကြည့်ပါ။
ပံုစံ 0.6 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - စနေ, 2010 ဒီဇင်ဘာ 11
ယခုပံုစံတွင်သီချင်းစာသားများ၊ သီချင်းစာရင်းဇယား၊ အနုပညာရှင်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၊ ဓာတ်ပံုများနှင့်အမည်များစာရင်းများနှင့်တူညီအနုပညာရှင်များအားလံုးစသည့်အင်္ဂရပ်များပါဝင်။ ဘေးတိုင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခါ၊ တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းများ၊ ဖွင့်သံအရေအတွက်များ၊ အရေအတွက်များခုန်ကျော်များလုပ်ဆောင်ပြီး။ သီချင်းတိုက်ရှိသီချင်းများမှချက်ချာသီချင်းစာရင်းများနှင့်သီချင်းစာရင်းအရှင်များဖန်တီးနိုင်ပြီး ဂျမန်တို နှင့်အိုင့်ကက်စ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဌာနများမှဂီတများကိုနားဆင်နိုင်။ ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစံု အခြားအချက်အလက်များကိုဤတွင်ကြည့်ရှုပါ။
ပံုစံ 0.5 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - စနေ, 2010 စက်တင်ဘာ 18
ယခုပံုစံတွင်ကလီမန်တိုင်းကိုရွေ့ပြောင်းပစ္စည်းများနှင့်အသံုးပြုနိုင်ရန်ထည့်သွင်းထား။ အိုင်ပေါ့၊ အိုင်ဖုန်း၊ အမ်တီပီ(သို့)ယူအက်စ်ဘီသိုလှောင်စုပံုစက်သို့သီချင်းများကိုကူးယူနိုင်။ အချက်အလက်များအတွက်ဝီကီတွင်ကြည့်ရှု။ ဝီအဝေးထိန်းများ ကိုအဝေးထိန်းကဲ့သို့အသံုးပြုနိုင်ရန်ထည့်သွင်းထား။ စီတန်းမန်နေဂျာ၊ ဖိုင်စုစည်းမှုအရေးအသား၊ သီချင်းစာရင်းတွင်ကော်လံများအလိုအလျောက်ဆွဲဆန့်၊ အိုင်ဒီ၃ဗီ၂အဖံုးအနုပညာမြှပ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ သီချင်းတိုက်ရွေးပိုင်ခွင့်ဖတ်ရှုခြင်းများ၊ သီချင်းစာရင်းများအကြားဆွဲယူလွှတ်ချခြင်းနှင့်ဟိုက်ဖ်နိုဖားစသည့်တစ်ခြားအင်္ဂရပ်များပါဝင်။ စတင်ချိန်တစ်ဝက်ခန့်လျော့ချ၊ မှတ်ဉာဏ်ယိုပေါက်များပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဂီတကိုနားဆင်နေစဉ်စီပီယူအသံုးချမှုများလျော့ချထား။ ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစံု အခြားအချက်အလက်များအတွက်ဤတွင်ကြည့်ပါ။
ပံုစံ 0.4 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - အင်္ဂါ, 2010 ဇွန် 29
ယခုဖြန့်ချိမှုတွင်မျက်နှာစာသံုးသီချင်းစာရင်းများ၊ သီချင်းစာရင်းရှာဖွေမှု၊ ပရောဂျက်အမ်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်းများ၊ မက်နကျွန်း၌ပေါင်းစပ်မှု၊ ရီပလေးဂိမ်းအသံပမာဏပုံမှန်ပြုလုပ်မှုနှင့်ဂီတပံုစံပြောင်းလဲခြင်းများပါဝင်။ ပရိုဂရမ်ယိုပေါက်များလည်းပြင်ဆင်ပြီးအပြင်ကြီးမားသောသီချင်းတိုက်များရှာဖွေမှုပိုမိုမြန်ဆန်လာ၊ ပြန်ဖွင့်ကဝင်းဒိုးပေါ်တွင်ပိုမိုအံ့ဝင်၊ အက္ခရာကုဒ်ပြောင်းခြင်းပြသနာများပြင်ဆင်ပြီး၊ အဝေးထိန်းသီချင်းစာရင်းများအချိန်တိုင်းမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းနိုင်။
ပံုစံ 0.3 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - စနေ, 2010 မေ 08
ယခုဖြန့်ချိမှုတွင်စက်လည်ပတ်စနစ်များစွာတွင်ရှိဂျီသီချင်းစီးကြောင်းသို့ပြောင်းရွေ့ထား၊ ယခုစိစစ်သူနှင့်တေးသံလမ်းကြောများအကြားအရောင်မှိန်ဖြတ်သန်းခြင်းဝင်းဒိုးတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်။ အသံထိန်းညှိသူ၊ သီချင်းတိုက်အုပ်စုအလိုက်ရွေးပိုင်ခွင့်များ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်ပံုရိပ်လှလှပြသခြင်း၊ ကွန်မန်းလိုင်းနှင့်အမ်ပီအာအိုင်အက်စ်မှအဝေးထိန်းခြင်း၊ ပိုမိုလွယ်ကူသောအမည်တည်းဖြတ်ြခင်းစသည့်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်။
ပံုစံ 0.2 ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ - အင်္ဂါ, 2010 မတ် 23
ကလီမန်တိုင်းပထမပံုစံဖြန့်ချိပေးခဲ့တာတစ်လကျော်ကျော်ရှိသွားပြီ။ ယခုပံုစံအသစ်တွင်အယ်လဘမ်အနုပညာအဖုံး၊ ပိုကောင်းသော"အနုပညာရှင်များအမျိုးမျိုး" ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ သီချင်းစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူနှင့်တစ်ခြားများစွာသောအင်္ဂါရပ်များပါဝင်။
ကလီမန်တိုင်းသည်ဂျီပီအယ်ဗီ3လိုင်စင်နှင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအခမဲ့ဆောဖ့်ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီဆိုက်သည်စီစီဘိုင်အက်စ်အေလိုင်စင်ယူထားပါသည်။
ထုတ်လုပ်သူ David Sansome, John Maguire နှင့် Arnaud Bienner. ဝဘ်ဆိုက်ရေးသားသူ Carlos Jenkins.